Ragga guska weyn oo gabdhaha dhareer ka keeno galmada lug taaga … - iftineducation.com
Ragga guska weyn oo gabdhaha dhareer ka keeno galmada lug taaga …
aadan21 / January 13, 2017
iftineducation.com – Baashaalka sariirta barasho gaar ah ahyay u baahan tahay sida Gaariga marka aad baranaysid Bare aad u baahan tahay wacdaraha.com ayaa gabdhaha u iftiiminaysa qaabka farsamaysan ee ay nimankooda ugu sheegan karaan in ay Bargo’ yihiin oo aanay qanacsaneen.
Si kaxeynta gaariga u baratid waxaa qasab ah in madax adeegga iska ilaaliso iyo hadalka qalafsan , sidoo kalana ciyaarta sariirtana waa saas oo kale, waa in aadan ku dhihin hadal dhibaya kana si careeysiinaya taasi oo sii xumeyneysaa wax qabadkiisa shaqada sariirta .
Si aadu barto farsamooyin uu sara ugu qaadayo qancintaada waxaa muhiim ah in aad siisaa casahro afka ah oo toos ah adiga oo dhaq dhaqaaqyo u muujinaya , tusaale ahaan waxaa suura gal ah in aad u baahan tahay in marka ciyaarta lagu jiro in gacantiisa uu meel jirkaaga ka mid ah ku salaaxo u sheeg qaabka aad rabto in uu sameeyo .
Wax yaabaha ugu muhiimsan ee kaa caawinaya in aad u sheegto ninkaada habka aad u rabto in raaxada uga hesho waxaa ka mid ah .
1- In Aad Furayaasha Siiso : inta badan haweenka gariirka macaanka kuma garaan galmada tooska ah ,haweeneydu waxa ay u baahan tahay in si wacan looga soo dareen kiciyo kintirka si toos ah , sidaa oo ay tahay waxaa jira haween aamisan in macaanka kaliya lagu gaaro galmada tooska ah ,
ogoow ninka galmo iyo baashaalin macaan ayuu sameynayaa marka uu ogsoon yahay goobaha lamaantiisa raaxada ka qaadato ee gabaryaheey u sheeg goobaha aad raaxada ka hesho si hawada sare uu ku giliyo.
Naagaha caba shahwada raga iyo faaidada ku jirta dhuuqmada guska
Dumarku Maxay u dhibsadaan Raga Sameeye Ficiladaan Xiliga Kulanka Raaxada